Sida loo dhigo widget-ka baarka Google ee ku yaal Android | Androidsis
Sida loo dhejiyo widget-ka baarka Google-ka Android
Mashiinka raadinta Google wuxuu noqday aalad muhiim ah sanadihii la soo dhaafay si aad u noqotid lambar 1 raadinta isticmaaleyaasha. Mid ka mid ah tartamayaasha ugu waaweyn maanta waa Bing, in kasta oo muddo ka dib ay lumisay saami badan oo ay ka door bidday cidda ugu badan ee la tartameysa.
Google waxay soo kordhineysay horumar badan sanadihii la soo dhaafay, mid ka mid ah ayaa ah in lagu daro baar raadinta, oo ku habboon mid ka mid ah daalacashada. Google Chrome tusaale ahaan wuxuu ku darayaa bogga Google si uu ugu bilaabo raadinta kasta, laakiin sidoo kale waxay siineysaa ikhtiyaarka lagu daro barta Google.
On Android waxaad ka dhejin kartaa widget-ka barta Google xawaare ka weyn, dhammaantood adigoon furin mid ka mid ah daalacayaasha lagu rakibay qalabkaaga. Mobilada qaar waxay leeyihiin wijitooyin kala duwan oo la bilaabay, oo ay ku jiraan saacadda mid, kuwa ka shaqeeya qaar waxay ku daraan wijigooda.
1 Marin dhaqso ah oo raadinta Google ah
2 Kudar baarka Google ee ku yaal Android
3 Baarka ka saar hadaadan jeclayn
4 Habee barta Google ee ku yaal Android
5 Habee qaabka baarka Google
6 Kudar barta Google Chrome ee ku taal Android
7 Ka saar barta Chrome ee ku taal Android
Marin dhaqso ah oo raadinta Google ah
Iyada oo qalabka widget-ka ah ee Google uu marin deg deg ah helayo raadinta kasta oo xilligaas saxda ah la doonayo, marka lagu daro ma sameyneyso isticmaalka sare ee xusuusta RAM. Mobilo kasta oo hooseeya, dhexdhexaad ah ama sare leh ayaa tan yeelan kara iyada oo aan lahayn dhibaato xagga isticmaalka ah.
Baarka Google ee Android wuxuu u shaqeeyaa sida kan Windows, waxay ina tuseysaa tilmaam yar oo aan ku raadin karno wax kasta oo aad rabto. Aaladda, sida kuwa kale, ayaa lagu rakibay taleefan anaga oo aan dareensanayn oo had iyo jeer la fiiriyo kuwa hawlgeliyey.
Kudar baarka Google ee ku yaal Android
Doonaya inaad dhigto barta Google ee ku taal Android Mid ka mid ah tallaabooyinka ugu horreeya waa in la helo barnaamijka Google, oo laga heli karo aalado badan, laakiin sidoo kale Dukaanka Play. Markaad soo dejiso oo rakibto, talaabooyinka soo socdaa waxay marayaan adigoo adeegsanaya widget-ka si aad uga shaqeyso.
Markaad ku rakibto taleefanka, waxaad u baahan doontaa inaad gasho hababka widget-yada, waa inaad taabataa meel bannaan oo shaashadda ah dhowr ilbiriqsi oo guji «Widgets». Markaad furto, waxay ku tusi doontaa Google Widgets, waa midka aad u adeegsan doonto si aad awood ugu yeelatid inaad ku dhejiso baarka Google-ka Android.
Marka la doorto ku soo jiido wijidka shaashadda weyn qalabkaaga, waxaa fiican inaad dhigatid dusha sare, saacadda agteeda. Si aad u dalbato isbeddelada, dhagsii qayb kasta oo ka mid ah shaashadda taleefanka si aad u xaqiijiso in isbedelada la keydiyay.
Markaad rakibto aaladda oo aad bilowdo, waxaa ugu wanaagsan inaad awood u leedahay inaad tijaabiso, meesha "Qor qoraalka" ah, dhig waxaad rabto inaad raadiso. Suurtagalnimada kale waxay tahay inaad awood u leedahay inaad codkaaga adeegsato markaad wax raadineyso, Si tan loo sameeyo, dhagsii makarafoonka ama iskuday inaad dhahdo kan caadiga ah: "Hello Google."
Baarka ka saar hadaadan jeclayn
Ikhtiyaar kale ayaa ah in laga saaro barta baaritaanka Google ee ku taal Android haddii ugu dambayntii aysan ahayn sidaad jeceshahay, in kasta oo ay timaado in dhaqso wax looga qabto. Waa sanduuq yar oo kaamil ah in la isticmaalo iyada oo aan wax badan la qaban oo la dedejiyo sida ay muhiimka u tahay in wax laga waydiiyo Google.
Si aad gebi ahaanba uga saarto, dhagsii widget-ka barta baaritaanka, riix oo hayso oo ku jiid astaamaha qashinka. Delete qalabka, laakiin waa la soo ceshan karaa markasta oo aad rabto adigoo isla sidaas samaynaya, sameynta aalad iyo xulashada midka Google.
Habee barta Google ee ku yaal Android
Si aad uhesho baarka Google ee kuxiran barnaamijka 'widget'Tallaabo kale oo muhiim ah ayaa ah inaad u qaabeysid sida aad u jeceshahay, waa mid ku habboon haddii aad rabto inaad haysato mid ka duwan kuwa kale. Midka ku yimaada asal ahaan waa midka qof kastaa isticmaalo, laakiin waad hagaajin kartaa qaar ka mid ah faahfaahintiisa ka dib markaad ku hayso desktop-ka.
Mid ka mid ah isbeddelada jaleecada hore waa in la beddelo cabbirka baarka, inaad rabto wax yar oo ka weyn waa goob ku habboon sidaa darteed uma baahnid inaad riixdo astaamo yaryar. Midka ku yimaada qaab ahaan waa heerka, waxaa ugu wanaagsan inaad heysato warqad weyn haddii aad rabto inaad had iyo jeer garaacdo oo aanad seegin, taas oo ku dhacda dad badan.
Si aad u habeysid barta Google ee ku taal Android Samee waxyaabaha soo socda:
Tag shaashadda gurigaaga ee qalabkaaga moobaylka
Guji batoonka Google Chrome oo riix dhowr ilbiriqsi, samee illaa aad ka aragto leydi
Waxay ku tusi doontaa dhowr tilmaame si aad u hagaajiso cabbirka baarkaSi aad u xaqiijiso, guji qayb kasta oo shaashadda ka mid ah oo way keydin doontaa isbeddelada, maadaama ay dhammaanayso hawshaas
Haddii aad rabto inaad u wareejiso baarka meel kale, ku cadaadi adigoon joojin adoo riixaya, jiido meeshaad rabto, ama sare ama ka hooseeya haddii aad rabto inaad xagga hoose ku haysato
Habee qaabka baarka Google
Waxaad sidoo kale u habeyn kartaa baarka Google ee ku yaal Android Siyaabo dhowr ah, midkood ayaa beddelaya qaabka, marka laga reebo cabbirka waa suurtagal. Shakhsiyeyn shakhsiyeed ayaa siin doonta taabasho iyo hawo nadiif ah, waa muhiim gaar ahaan haddii aad rabto baarkaagu inuu noqdo mid gaar ah oo ka sarreeya dhammaan waxyaabaha ka duwan.
Si aad u habeysid baarka Google ee Android adoo adeegsanaya widget Riix xulashada "Customize Widgets", ka dibna wax yar sug oo waqti ku qaado. Intaas waxaa sii dheer, ma ahan wijidka kaliya ee aad wax ka beddeli karto, waxaad gacantaada ku haysaa kuwa aad ku shaqaysay.
Si aad ugu saxdo baarka Google ee ku yaal Android, samee talaabooyinkan:
Dhagsii badhanka "G" si aad ubadasho astaanta Google, fagaaraha iyo goobada waad ka beddeli kartaa baarka Google, laakiin wuxuu leeyahay palette midab iyo hufnaan ah, haddii aad jeceshahay casaan, cagaar, iyo kuwo kale oo badan oo uu soo xulan karo adeegsadaha
Isbadal kasta oo aad rabto inaad keydiso, taabo banaanka baarka Google haddii aad rabto inaad keydiso talaabooyinka iyo dhammaan isbadaladaas ilaa iyo hada la sameeyay, waxaa lagama maarmaan ka ah dhamaantiis inaan la rabin inay lumaan
Si aad ugu soo celiso isla codka iyo cabirka, riix "Dib ugu celi qaabka caadiga ah", tani waxay ka dhigi doontaa inay u tagto kii aad soo dejiso, labadaba cabir ahaan iyo sidoo kale midab iyo midabkuna wuxuu ahaan doonaa sidiisa oo kale had iyo jeer, dhammaantood isagoon dooran mid u dhigma
Kudar barta Google Chrome ee ku taal Android
Ikhtiyaar kale oo la tixgeliyo ayaa ah in lagu daro barta Google Chrome ee ku taal Android, tan waa inaad horey ugala soo degsatay barnaamijka Play Store. Waxay leedahay miisaan aad u yar, waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican uguna dhaqsaha badan, waana sababta ay dad badan ugu taliyeen inuu yahay mid ka mid ah kuwa caanka ah, isagoo ammaan ah.
Google Chrome: dhakhso leh oo ammaan ah
Markaad soo dejiso oo rakibto, nidaamka lagu fulinayo waxoogaa la mid ah wixii aan sameynay ilaa hadda baarka Google ee ku yaal Android oo leh widget. Si tan loo sameeyo, waxa ugu horreeya ee la sameeyo ayaa ah in la ogaado in aaladda loo yaqaan 'widget' ay tahay codsi la yareeyay, sidaa darteed waxay u shaqeyn doontaa si isku mid ah biraawsarka webka.
In lagu daro barta Google Chrome ee ku taal Android Samee waxyaabaha soo socda:
Soo gal shaashadda ugu weyn ee qalabkaaga
Hadda riix si aad uhesho ku dar Widgets leh taabasho dheer meel madhan oo shaashadda ah
Raadi oo hel meesha "Kooxda Google Widgets" ugu dambayntiina garaac «Google Search»
Riix Raadinta Google oo riix dhowr ilbiriqsi ka dibna ku jiido miiska haddii aad rabto inaad had iyo jeer yeelato
Sida ku dhacda baarka Google, waxaa fiican in haddii uu ka sarreeyo ama ka hooseeyo saacadda taleefanka, waa toobiye iyo wixii ka sarreeya oo dhan waa muhiim haddii waxa aad rabto ay tahay inaad awood u yeelato inaad weydiimo degdeg ah sameyso
Ugu dambeyntiina, si aad u keydiso saameynta, guji meel bannaan oo aad wax kaga beddelayso
Baarka raadinta Google Chrome wuxuu u shaqeeyaa si isku mid ah, ku qor erey ama URL si aad u hesho macluumaad badan oo gaar ah. Ku darista qoraalka, suurtagalnimada kale waa raadinta codka, waxay la shaqeysaa amarrada aasaasiga ah ee Kaaliyaha Google mar aad gujiso makarafoonka.
Ka saar barta Chrome ee ku taal Android
Sida barta Google ee ku taal Android, in laga saaro barta Google Chrome ee ku taal Android way fududahay sida aad gujiso. Tan si ay u dhaqan gasho, waxa ugu fiican ayaa ah in loo diro qashinka, midigna astaanta qashinka isla markaana waxay qaadan doontaa wax yar in ka yar hal sekan in la sameeyo.
Google Chrome wuxuu leeyahay shaqooyin badan oo dheeri ah, sidaa darteed haddii aad ikhtiyaar u leedahay inaad mid ama mid kale rakibto, ka dooro mid ka mid ah shabakadda internet-ka ee caanka ah. Google Chrome wuxuu koray muddooyinkii ugu dambeeyay isagoo ku daray xulashooyin dheeri ah oo dheeri ah, oo ay kujirto inuu kahortago tartankiisa
Markaad tirtirto qalabka waxaad dib uheli kartaa hadaad markale taleefankaaga kahesho, ma cunayso xusuus sare waana agile marka aad adeegsanayso dalabka. Widgets-ku waxay la mid yihiin daaqadaha sabayn, laakiin bilaabida codsi yar oo leh dhammaan faa'iidooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo dhejiyo widget-ka baarka Google-ka Android
6 barnaamij ee jadwalka caadada ugu wanaagsan ee Android
Halkee laga daawan karaa Formula 1 oo bilaash ah sanadka 2021